SADC Yokoka VaMugabe, VaTsvangirai naVaMutambara kuMusangano Wayo kuNamibia
Sangano reSADC rakoka mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, uye mumwe wevatevedzeri vavo, VaArthur Mutambara, kuti vapinde mumusangano wesangano iri kuNamibia svondo rinouya.
Munyori weSADC, VaTomaz Salomao, vanoti Zimbabwe ichakurukurwa nezvayo pamusangano uyu.
Nhumwa yemutungamiri weSouth Africa, VaJacob Zuma, VaMac Maharaj, vanoti VaZuma vachapa gwaro rezvavanenge vabuda nazvo kuna sachigaro weSADC troika, VaArmando Guebuzza, mutungamiri weMozambique. VaGuebuzza ndivo vachazosuma vamwe vatungamiri nezvenyaya iyi.
Asi VaMaharaj, avo vange vavaka musasa muZimbabwe vachiedza kuyananisa pagakava rezvematongerwo enyika paVaTsvangirai naVaMugabe, varamba kutaura kuti vasvika papi nenyaya yavo vachiti vanoda kumbopira VaZuma. Nyaya dziri kunetsa muhurumende yemubatanidzwa dzinosanganisira dzekudomwa kwagavhuna webhanga guru renyika, VaGideon Gono, pamwe nemuchuchusi mukuru wehurumende, VaJohannes Tomana, naVaMugabe vasina kusuma vamwe vavo, VaTsvangirai naVaMutambara, sezvinodiwa nechibvumirano chakavaka hurumende iripo.
Imwe nyaya yanetsa ndeyekusatoreswa mhiko naVaMugabe kwaVaRoy Bennet semutevedzeri wegurukota rezvekurima nyaya, pamwe nekusagadzwa kwemagavhuna eMDC mumatunhu akakunda bato iri.
Gurukota rinoshanda muhofisi maVaTsvangirai, VaJameson Timba, vanoti Zimbabwe ichakurukurwa nezvayo pamusangano uyu uye vane chivimbo chekuti matambudziko enyika achagadziriswa.